ပင်မစာမျက်နှာရှိကြော်ငြာများ? | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 22, 2007 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Douglas Karr
သညာသည်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ ငါဒီအတိုင်းမှန်ကြောင်း, အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, အစဉ်အမြဲငါယုံကြည်ပါတယ်။ ၀ န်ထမ်းများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သူဌေးအမျိုးအစားများအတွက်သူတို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်၏အမြင်စတော့ရှယ်ယာတုံ့ပြန်ပုံဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ဖောက်သည်များ၏အမြင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ငါပိုက်ကွန်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသည့်အခါအချို့သောသူရှိပါတယ် သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငွေရှာဖို့မယုံကြနဲ့နှင့် အချို့သော ထို do။ ဤဆိုဒ်များတစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏ပုံစံများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာများထပ်မံထည့်ခြင်းများကိုမြင်သောအခါသူတို့၏ ၀ င်ငွေနှင့်အတူစာဖတ်သူများတိုးများလာခဲ့သည်။
သင် Cadillac (သို့) Kia ကားမောင်းသည့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကိုရွေးချယ်မလား။
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သညာသည်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ site သည်အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်နောက်အဆင့်သို့တက်ရန်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့သောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာရန်ကုမ္ပဏီများကများများချဉ်းကပ်လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အခန်းမရှိ၊ ထိုကြော်ငြာများကိုခြေရာခံရန်လုံလောက်သောစနစ်မရှိပါ။ ဒါကြောင့် - ငါဆောင်ပုဒ်အပေါ်အချို့သောအလုပ်ကိုပြု၏။
ငါသော်လည်း, ထိုဆောင်ပုဒ်အပေါ်အချို့သောအလွန်သတိထားအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါထောက်ပံ့ချင်တယ် နေရာကောင်း ဆိုက်ကိုကမကထပြုချင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်တော့၊ ဒါပေမယ့်ငါကအချက်အလက်ကိုမဆွဲဆောင်ချင်ဘူး။ ငါတကယ်မြင်သောပိုက်ဆံအိတ်ဘလော့ဂ်များ ပိတ်ဆို့ စာဖတ်သူများကြော်ငြာနှင့်အတူအကြောင်းအရာမှလမ်းကြောင်း။ ငါကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောနှင့်မလိုအပ်သောင်ယုံကြည်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာအတွက်ကြော်ငြာများကို scrolling လုပ်ခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့တွင်ကြော်ငြာများကိုအကောင်အထည်ဖော်သောအခါရွှေစည်းမျဉ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါကြော်ငြာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၂၅px မှ ၁၂၅px ရှိပြီးကြော်ငြာများတွင်အတော်အတန်ကောင်းသောစံနမူနာဖြစ်သည် ကော်မရှင်လမ်းဆုံ နှင့် နှစ်ချက်ကလစ်။ ဤရာထူးကိုအမှန်တကယ်ကမကထပြုသူမှအသုံးမပြုပါက၎င်းကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှကြော်ငြာဗလာနှင့်ကျွန်ုပ်ဖြည့်နိုင်သည်။
ဒီအချက်ကမင်းကိုစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်ငါစာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်ကိုဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ The RSS feed များသောအားဖြင့်သူကအောက်ခြေမှာတစ်ခုတည်းသောစပွန်ဆာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါကြော်ငြာရှင်များကိုမှန်မှန်ပယ်ချကြောင်းကိုလည်းသိပါ ဒီတစ်ပတ်မှာကြော်ငြာကိုတင်ချင်ရင်ကိုယ့်ကိုငွေပေးချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ဆီချဉ်းကပ်လာတယ်။ ငါ (Google: ခေါ်) ဂူဂဲလ်ကိုသုတေသနပြုတဲ့အခါသူတို့က adware နဲ့ spyware တွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့တာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလှည့်စားနည်းတွေကိုသုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုအသိပေးလိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးမှတ်စုတစ်ခုမှာကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်ခေါင်းစဉ်ပေါ်ရှိ 'စွဲမက်ဖွယ်ရိုက်ချက်' ကိုမှတ်ချက်ပေးကြသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်တောင်မှရတယ် အဲဒါကိုလည်ချောင်းနာ. သညာသည်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မနေ့ညက MacBookPro iSight ကင်မရာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်ပြီးခေါင်းစီးထဲသို့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်သည်။ ဤအရာသည်သင်တို့အများစုကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ သိ၍ …မီးခိုးရောင်နှင့်ပြုံးနေသည်တကား!
22:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 12
ကောင်းသော Doug ရှာဖွေနေ! သင်မှန်ပါသည်၊ ထိုကြော်ငြာများသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနည်းနည်းမဟုတ်ပါ။ Plus အားငါစတိုင်သစ်ကိုကြိုက်တယ်။ အရမ်းလတ်ပါတယ်
22:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 52
များသောအားဖြင့်မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို RSS ကနေတဆင့်ဖတ်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါဒီဇိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရတော့မယ်။
Hmm …ငါ့အတွက်အခုတော့လူနေထူထပ်လာပြီ။ အထူးသဖြင့် flash ads များသည်မီးထိုးဖို့အတွက်အာရုံစူးစိုက်ရခက်သည်။ သူတို့ကအဆက်မပြတ်စာသားကနေအာရုံကိုသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားပါ။
ငါဘလော့ဂ်ငွေရှာဖို့ဆန့်ကျင်မဟုတ်နေစဉ်, ငါစာသား၎င်း၏အာကာသပေးထောက်ခံပါတယ်။ Whitespace ဟာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ ကြော်ငြာတွေနဲ့ပြည့်နေသင့်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။
မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဒီဂျစ်တယ်အမှောင်ခန်း (ခေါ် Photoshop သို့မဟုတ်အလားတူ) အလုပ်မှရရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အရောင်တွေကနည်းနည်းအားနည်းနေပုံရပြီးညာဘက်ခြမ်းမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာကင်မရာကိုအနည်းငယ်မကြည့်ပဲကြည့်နေပုံရသည်။ သင်၏ ဦး ခေါင်းပတ်လည်ရှိအဖြူရောင်ဘရိတ်နှင့်အတူ, ဒီကစိတ်အားထက်သန်, ဂုရုကဲ့သို့ခံစားချက်ပေးသည်။
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ရဲ့အရောင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်မယ်။ ပုံတူကိုပိုမိုရှည်လျားသောမှန်ဘီလူးဖြင့်ရိုက်ကူးပါ။ သင့်မျက်လုံးထဲတောက်ပနေစေရန်အနည်းငယ်သောအလင်းရောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
22:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 6, 08
မင်္ဂလာရှိသောကျေးဇူးတုံ့ပြန်, Doug ။ မင်းရဲ့ glamor ရိုက်ချက်ကိုငါကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရိုက်ချက်အသစ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့အပြုံးရဲ့ပိုပြီးပြတ်သားမှုပဲ။ ငါပုံစံသစ်ကိုကြိုက်တယ် ငါလိုချင်လျှင်ကြော်ငြာကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်လိုလျှင်ကြည့်နိုင်သည်။
22:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 52
၎င်းသည်သင်ဤနေရာတွင်မွေးစားခဲ့သောကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် adserver ကိုမသုံးသလဲ သင်၏ကြော်ငြာရှင်များကလစ်နှိပ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခြေရာခံနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်🙂
23:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 02
ဟေ့ Doug၊ ဒီဗီဒီယိုအတွက်ဂူဂဲလ်ထည့်သွင်းမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပါ။ * oops *
သင့်မှာကြော်ငြာနေရာအချို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြတာလဲ အခွင့်အရေးရရင်ငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ရိုက်ပါ။
ငါ့မှာ Jaime ရဲ့ဒေါ်လာ ၇၀,၀၀၀ လောက်စာအုပ်ရောင်းအားထက်အများကြီးပိုငွေရှာမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပြီးသူက Next Internet Millionaire ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။
24:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 58
23:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 16
တကယ်တော့ဒါကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏ layout ဟောင်းကိုမှတ်ချက်မပေးနိုင်ပါ။ ကြော်ငြာသိပ်မလိုပဲလတ်ဆတ်သန့်ရှင်းနေပုံရပါတယ်။
ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်၏ပုံတစ်ပုံရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ မသေချာဘူး။ ခင်ဗျားစာဖတ်သူတွေကခင်ဗျားဘယ်သူလဲဆိုတာမြင်ရင်ဒါကပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ထင်တယ်။
23:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 35
ဟေ့ Doug ငါပုံသစ်သစ်ကိုကြည့်ရတာကောင်းတယ်။ မင်းရဲ့“ glamour shot” ဟောင်းနဲ့ပြaနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အသစ်ကကောင်းတယ်။
23:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 18
အသေးစားပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် - အချို့သည်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံသည်။
တကယ်တော့တကယ်တမ်းပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာဟာအနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်တယ်။ ငါရိုးရှင်းစွာလက်ရှိ layout ကို၏တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ရှေးရှေးအကြောင်းအရာများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်ရန်ငါသည်လည်းခေါင်းစီး၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
24:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 7, 41
၎င်းသည်သင့်အတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မည်မဟုတ်သော်လည်းစာဖတ်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဝက်ဘ်နှင့်ဘလော့ဂ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးပွားဖြစ်ရောင်းချခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်မှာကြာပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်၏ထိုအပိုင်းတွင်အဆက်အစပ်များကိုခွဲထုတ်ရန်အချိန်ကျပြီဖြစ်သည်။ ဒါဆိုဟုတ်တယ်၊ ငါဒီမှာနေရတာပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့ငွေတွေတောင်းတဲ့တောင်းပန်သံတွေကြောင့်နစ်မျောနေတဲ့ခံစားမှုကိုငါခံစားမိတယ်။ (ထို့အပြင်ဖယ်ထုတ်ထားသည့် Content Link ပေါ်ရှိကြော်ငြာများသည်အစဉ်အမြဲတီထွင်ခဲ့သောအဆိုးရွားဆုံးသောကြော်ငြာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ရမည်)
24:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 56
မင်းကိုငါ့ကိုအသိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှငါ့ကိုပိုက်ဆံပေးခိုင်းတာကိုငါမတောင်းပန်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အကြံဥာဏ်အများကြီးပေးရတာကအပြစ်မဟုတ်ဘူး၊ ဘလော့ဂ်ကိုအပြည့်အ ၀ စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ကြိုးစားတာတော့မဟုတ်ဘူး။
အချို့လူများကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏အောင်မြင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ တစ်စုံတစ်ရာထင်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ နှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းမှာတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းကိုအာမခံပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လူလတ်တန်းစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ အိမ်မရှိသေးပါ၊ ငွေစုဆောင်းရန်အတွက်ကြိုးစားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ဒေါ်လာရာဂဏန်းအနည်းငယ်ပိုများနိုင်လျှင်၎င်းသည်အားလပ်ရက်အိမ်များသို့မဟုတ်ဖန်စီကားများပေါ်တွင်အသုံးမချတော့ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သား၏ကောလိပ်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
24:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 08
ငါသည်သင်တို့ကိုဤတ Doug အပေါ်သဘောတူသည်။ Myk လိုလူများကဘလော့များနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအနည်းငယ်သာမသုံးဘဲဤကဲ့သို့သောအသုံး ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမည်သို့ပေးပို့နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
သငျသညျ John Chow ဆိုလျှင်၎င်းသည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အချို့နှင့်အလွန်အမင်းနစ်မြှုပ်သွားသည်။ သို့သော် Doug အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ကသင်၏သားကိုကောလိပ်မှသင်ကြားရန်လူလတ်တန်းစားဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေငွေအနည်းငယ်ရချင်တဲ့သင့်ဆန္ဒကိုငါအပြည့်အဝနားလည်ပြီးလေးစားတယ်။ သင့်စာဖတ်သူများအားသင်ပေးအပ်ထားသည့်အရာကြီးများနှင့်အတူအနည်းဆုံးသင့်အနေနှင့်ထိုက်တန်ပါသည်။
25:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 41
ပထမ ဦး စွာ, Brandon, Myk ကဲ့သို့သောလူများ - boooh ။
ငါကိုယ်တိုင်နှင့်တစ် ဦး တည်းအတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယေဘူယျထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကသူ့အတွက်ပဲ။ ငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ငါသိတယ်၊ ငါဖတ်တဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါရွေးခွင့်ပြုလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ငါဘယ်စာမဖတ်လဲ၊
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ပါးစပ်ဆေးတံကိုစမ်းသုံးကြည့်သလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရသာကောင်းသောဝက်အူချောင်းကိုမြည်းစမ်းခဲ့ဖူးပါသလား။ ငါ့ကိုအိမ်တစ်လုံးရောင်းဖို့ကြိုးစားနေစဉ် - ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ဒါဟာကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြိုက်တတ်တဲ့ပါပဲ။
(ကျွန်ုပ်သည်ဖခင်လည်းဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိတွင်အိမ်သို့ငွေကိုယူဆောင်လာသူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်ငွေကိုမထိခိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်ရုံမျှသာဖြစ်သည်။ )
25:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 48
ငါဒီမှာ Doug တက်ကပ်ရန်ရှိသည်; သင်ကြော်ငြာသည်သူ၏ဘလော့ဂ်တွင်ထူးခြားသောကြိုးပမ်းမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ၀ င်ငွေကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သည်ဟုသင်သံသယဝင်ခဲ့သည်ဟုသင်ပြောခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းဗျူဟာအတွက်သင်အကြံပြုချက်မပေးပါ။ ဒါကြောင့်မင်းကိုငါစိန်ခေါ်; အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါက Doug အားမှန်ကန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအရအလားအလာရှိရန်အကြံပြုခြင်းသည်မည်သို့နည်း။
25:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 50
PS ငါပေးသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ လူများကညည်းညူသောအခါငါအမြဲရှာလေ့ရှိသည်မှာအနည်းငယ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာရယ်စရာဖြစ်သည်။ FWIW ။
25:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 7, 06
ခင်ဗျားကြည့်ရှု့သူ Mike၊ ဘလော့ဂ်တွေကငွေရှာတဲ့နည်းဗျူဟာရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ငြင်းဆန်ခဲ့သည် မှာအားလုံး။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါကကျွန်ုပ်နဲ့အတူပါ။ တကယ်တော့ဒီအချက်ကိုငြင်းခုံစရာမလိုပါဘူး
ထိုအခါငါ Doug တစ်ခုခုပြောင်းလဲသင့်ကြောင်းအကြံပြုအဖြစ်ဖြတ်ပြီးမလာကိုမျှော်လင့်ပါတယ် ကျွန်တော့်အတွက်။ သူမလုပ်သင့်ဘူး။ သူထင်သည်အတိုင်းမှန်သင့်သည် သူ၏ ဘလော့ဂ်။
ဒီတစ်ခါလည်းကျနော့်မှတ်ချက်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ် ငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရာမဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်၊ ငါလမ်းမကြိုက်ဘူး ငွေကြေးမဟာဗျူဟာများ ဘလော့ဂ်၏ရှေ့တန်းမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ဒီတော့ဒီဘလော့ဂ်သွားမယ့်လမ်းဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်။ ငါဘလော့ဂ်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ခံစားချက်အတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ထင်တယ်
ငါ့ကိုစိန်ခေါ်သည်။ ကောင်းပြီ ... ကြည့်ရအောင်။ ငါသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်၊ ငါပစ္စည်းတွေကိုအခမဲ့လိုချင်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ငါဂီတကို download လုပ်မပေးပါဘူး, ငါရုပ်ရှင်တွေကို download လုပ်ပါ။
ဒါကဆိုပါတယ် ငါသည်ဤဘလော့ဂ်များအတွက်ကြေးပေးသွင်းကြေးပေးဆောင် (ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတစ်လ $ 300 ကဲ့သို့သောမဟုတ်လျှင်) ပေးလိမ့်မယ်။ အခုငါအော်ဟစ်ငိုကြွေးသောလူများရှိလိမ့်မည်ကိုငါနားလည်သည် နည်းလမ်းမရှိ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအင်တာနက်ပဲ။
ကောင်းပြီ၊ ပစ္စည်းပစ္စယများအတွက်နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာများနှင့် texlink popups အဘို့ကိုကယ်တင်အခမဲ့ပါပဲ ငါဒီကိုမလာဘူး.
ကျွန်ုပ်၏တီဗီစီးရီးတွင်ကြော်ငြာများကိုမကြိုက်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီတွေကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်။ ငါရုပ်ရှင်မဖွင့်ခင်နာရီဝက်လောက်ကြော်ငြာတွေကိုမထိုင်ချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီဝယ်ရတာ။
ငါပြုမည် မဟုတ် သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုရုပ်ဆိုးသောတတိယပါတီကြော်ငြာများဖြင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အရာရာကိုအခမဲ့ယုံကြည်ပါ။
I am ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့အဆင်သင့်။ Id ကိုသာ Doug သို့တိုက်ရိုက်ပေးမည်မဟုတ်ဘဲရိုးရိုးရွယ်ရွယ်“ click through channels” ကို ဖြတ်၍ သွားသည်။
25:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 59
ငါကငါ့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတစ်နည်းနည်းနဲ့ကွဲပြားတာပဲလို့ငြင်းတော့မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကငွေအများကြီးရနိုင်ပြီးအဲဒါကိုငါလည်းသုံးနိုင်တယ်။ (ခ) ပိုက်ဆံရှာသောဘလော့ဂ်များသည်သူတို့အောင်မြင်မှုရှိသည်ဟူသောထင်မြင်ချက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
နောက်ဆုံးမှတ်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏“ Buy meaStarbucks” ခလုတ်သည်လွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်းကျွန်ုပ်အားဒေါ်လာ ၂၅ ခန့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ 'တိုက်ရိုက်' ငွေရှာခြင်းကြိုးပမ်းမှုသည်အတော်အတန်ကြီးမားခဲ့သည်။ 🙂
25:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 38
Myk, ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့သဘောထားကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။
25:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 31
@Myk - မိုက်ကယ်၊ ငါကြည့်လိုက်ရင်ဘလော့ဂ်တွေအားလုံးမှာပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့နည်းဗျူဟာရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုငါငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါကကျွန်ုပ်နဲ့အတူပါ။ တကယ်တော့ဒီအချက်ကိုငြင်းခုံဖို့မသုံးပါ။
ငါငြင်းမည်မဟုတ် အဲဒါမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပဲ။ မင်းကမင်းမှာအဲဒါရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မင်းကမင်းကိုလက်တွေ့မကျဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါလည်းအဲဒီအမြင်မျိုးရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ 🙂
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကို“ မဂ္ဂဇင်းများ” လို့ခေါ်တယ်။ 🙂
@Il-Series မှာကြော်ငြာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီတွေကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်။ ငါရုပ်ရှင်မဖွင့်ခင်နာရီဝက်လောက်ကြော်ငြာတွေကိုမထိုင်ချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီဝယ်ရတာ။
သင်သည်ပန်းသီးနှင့်လိမ္မော်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ တီဗွီကြော်ငြာတွေကသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုသိသိသာသာစည်းကြပ်လို့ဆိုတော့မင်းကသူတို့ကိုမကြိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပေမယ့်လူတွေကတော့ငါလိုမကြိုက်ကြဘူးလို့ငါပြောနိုင်တယ်။ ဘလော့ဂ်ကြော်ငြာများသည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုနည်းပါးပြီး၊ (ပေါ်လာသည့်ကြော်ငြာများမှအပ) လူတို့၏အချိန်ကိုအလဟ don't မဖြုန်းတီးပါ၊ '-)
ဘလော့ဂ်တော်တော်များများအတွက်ကောင်းပါတယ် - "ဒီလင်ကွန်းလင်ကွန်းအပြင်ဒီပြဇာတ်ကဘယ်လိုလဲ။ "
@Myk: ငါပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ငါသာရဲရင့်သောအရိပ်များဖြတ်သန်းသွားမည့်အစား Doug ကိုတိုက်ရိုက်ပေးရမည်။
ငါထင်တာကတော့မင်းကလူနည်းစုပဲ။ အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့ပါက Doug နှင့်အခြားဘလော့ဂါများသည်ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျိုးနွံပေမည်၊ သို့သော် 90% ထက်ပိုပြီးပေးဆပ်စရာမလိုသောကြောင့်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီလိုအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကျိုးရှိရှိလုပ်နိုင်မယ့်လူတွေရှိတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမှားနိုင်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကသူလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါပိတ်ဆို့ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းမထားဘူး။
@Myk: ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွေဘလော့ဂ်ရဲ့ရှေ့တန်းကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုငါမကြိုက်ဘူး။ ဒီတော့ဒီဘလော့ဂ်သွားမယ့်လမ်းဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်။ ငါဘလော့ဂ်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ခံစားချက်အတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ထင်တယ်။ ဒီဘလော့ဂ်အတွက်လစဉ်ကြေးပေးရမယ် (တလဒေါ်လာ ၃၀၀ လိုမှလွဲရင်) ။ အခုတော့ငါနားလည်သဘောပေါက်သောလူအစုအဝေးမရှိလမ်းအော်ဟစ်ရှိလိမ့်မည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်သည်အင်တာနက်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်၏လုပ်ရပ်များသည်တရား ၀ င်နေသရွေ့သင့်ခံစားချက်များအပေါ်ပြုမူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်လုံးဝရှိသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်မီးသတ်ဗုံးခွဲမှုသည် Doug ၏အိမ်သည်ထိုခံစားချက်များကိုပြုမူရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ 🙂သို့သော်လူ့သဘောသဘာဝကိုလေ့လာလိုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင်ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအရာတစ်ခု၏တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၎င်းကိုစတင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းဆက်လက်နေထိုင်ရန်မှာလက်တွေ့မကျသော်လည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါ။
သမိုင်းတွင်မသန်စွမ်းသူများအတွက်ဥပမာများစွာရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်သမိုင်းတွင်မှတ်စုများဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် CD များကိုမုန်းသောသူများသည်ဗီနိုင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏မကျေနပ်မှုသည်ဒီဂျစ်တယ် encoded music သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုသိသိသာသာမတားဆီးနိုင်ပါ။ ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်းကိုမုန်းသောသူများ၏တူညီသောပုံရိပ်များကဘလော့ဂ်များကိုအခမဲ့ပြန်သွားစေမည်မဟုတ်; ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အခက်အခဲများစွာ (လူသိများသည်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီး၊ ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ!) သည်လူများကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်စီးပွားရေးမက်လုံးများလိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူတွင်ရှိသည့်အခြားရွေးချယ်မှုများအရကြေးပေးသွင်းထားသောမော်ဒယ်များသည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်းကြော်ငြာပုံစံများမှာအလုပ်လုပ်သည်။ New York Times တောင်မှကြော်ငြာခြင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်; NYT မှတွေ့ရှိချက်သည်ကာကွယ်မှုထက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ http://www.mikeschinkel.com/blog/attentionhasbecomeworthmorethanprotection/ (သို့သော်ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြော်ငြာများရှိသောကြောင့်သင် link ကိုမလိုက်ချင်ပါ။ )
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ငြင်းခုံချက်၏အဓိကအချက်မှာသင်၏ကြော်ငြာများကိုသင်မကြိုက်ခြင်းသည်သင်နှင့် (အလားတူခံစားချက်မျိုးရှိသူများ) ကိုသာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သင့်ခံစားချက်များကိုသင်ခံစားခွင့်မှလွတ်ကင်းသူဖြစ်သည်။ ရှေးလူဟောင်းတစ် ဦး က“ လူတစ်ယောက်ကိုဂျက်ဆန်ဖြင့်ရိုက်နှက်လိုက်သည်။ သူကအရင်းအမြစ်ကိုစဉ်းစားပြီးသူ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာကြော်ငြာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လက်ခံလိုက်ရုံပါပဲ။
သင်က“ ဒီအချက်ကိုအငြင်းပွားမနေပါနဲ့” လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကဒီအချက်ကိုငြင်းခုန်နေတယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ငါပြောင်းလဲလိုက်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေသည်၊ ၎င်းသည်ဟောင်းနွမ်းသောလမ်းစဉ်သို့ပြန်လှည့ ်၍ မရ၊ ၎င်းသည်စိတ်သောကရောက်နေသူအတွက်ဘ ၀ ၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့လျော့နည်းစေသည်ကိုငါဆွေးနွေးနေသည်။ ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလက်ခံဖို့သင်သင်ယူမယ်ဆိုရင်သင်ဟာပိုပြီးပျော်ရွှင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
24:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 07
24:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 07
ဟားဟား! သင်၏ရာထူးသည်သင်၏ရာထူးကိုအနည်းငယ်မျှသာပြောရန်ကြိုးစားနေပုံရသည်။ '-) ထိုသို့ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်လုပ်ရုံအချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်။ ဒါကိုလုပ်ပြီးဆက်လုပ်ပါ လူတွေကဒီအကြောင်းကို bitch လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကသူတို့ပြproblemနာပဲ။
BTW, ကျွန်တော်က Kia ပိုင်ရှင်ကိုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အတွက်သုံးမယ်။ ငါသူတို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖြစ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြောင်းတွက်ဆလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ယနေ့ Cadillac ကိုမည်သူမောင်းနှင်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဒါက Kate Walsh အပြင် ... '-)
24:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 02
လုံးဝသူ Mike ။ ငါကြော်ငြာတွေကိုတရားမျှတချင်တယ်ဆိုတာသေချာတယ် - အရင်တုန်းကကြော်ငြာတွေကိုသူတို့ရဲ့ home page တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါသို့သော်ဤဆောင်ပုဒ်အပေါ်နေရာချထားအတွက်အချို့သောဂရုစိုက်ခဲ့ပေ။
အမြတ်နဲ့ကျင့် ၀ တ်ကြားမှာဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ CTS အသစ်ကိုငါနှစ်သက်တယ်၊ တစ်ယောက်ကိုမောင်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဇိမ်ခံကားပေါ်မှာငါငွေမဖြုန်းခင်နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။
24:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 33
အိုး…ပြောချင်တာကဆင်ခြင်တုံတရား"မဟုတ်ဘူး"မှနျကနျကွောငျးသကျသပွေ'… (ဒို! 🙂
အမြတ်အစွန်းနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရ၊Cadillac အတွက်အပြာရောင်ဆံပင်"နည်းနည်းများလွန်း (အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အများစုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံရေဒီယိုကြော်ငြာနေရာမှကောက်နုတ်ထားသည်။ )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ် (ဒီ post ကို '-p မှတပါး)